हिमाल खबरपत्रिका | रार
यता, शेषनागमा शयन गरिरहेका विष्णु ब्युँझ्एि । तर, छेउमा अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी थिइनन् । उनले आफ्नी पत्नी गरीबको कल्याण हेतु पृथ्वीतिर लागेको र सूचना विभागले छापेको क्यालेण्डरमा बसेको पत्ता लगाए । लक्ष्मीले गरीबहरूलाई जथाभावी असर्फी बाँडेर धनको अपव्यय गर्लिन् भन्ने चिन्ता भयो विष्णुलाई । अन्ततः उनले हातबाट असर्फी झर्न सक्ने लक्ष्मीको शक्ति हरण गरिदिए । लक्ष्मी क्यालेण्डरहरूमा शक्तिहीन भएर बस्न बाध्य भइन् ।
स्मरण रहोस्, लक्ष्मी माताको चित्र भएको क्यालेण्डर छापिंदै गर्दा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा माफिया, न्यायाधीश, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र नेताहरू मिलेर धमाधम भागबण्डा गरिरहेका थिए । उता, काठमाडैँदेखि निकै पश्चिम मधेशको एउटा गाउँमा भने कसैको एकधुर जग्गा पनि थिएन । सबै ऐलानीमा छाप्रो बनाएर बसेका थिए । देशमा विकासका ठूलाठूला विलासी गफ चलिरहेको बेला उनीहरू साँझ्को छाकको लागि गडहनी साग र मकैको पीठोको जुगाडमा लाग्थे । यो कथा, त्यही गरीब गाउँको हो । शेषनागमा मस्त सुतिरहेका र अरू तमाम भगवानहरूले नदेखेका गाउँको कथा ।
प्रार्थना गरिसकेपछि उनले जिब्रोबाट सुइरो झ्किे र त्यसमा सिउरेको पानको पात चपाए । जिब्रोको घाउ निको पार्ने यो प्राकृतिक तरिका थियो ।
रामनवमीको पूजा सकेर सतिया पनि फोहोरमा प्लाष्टिक बटुल्न बजार आएकी थिइन् । फोहोर खोतल्दा खोतल्दै उनले एउटा क्यालेण्डर फेला पारिन् । पात्रोमा धनकी देवी उनै लक्ष्मीको रङ्गीन चित्र छापिएको थियो । चित्रमा विशाल समुद्रमा फुलेको कमलको फूलमाथि उभिएकी लक्ष्मीका हातबाट सुनौला असर्फीहरू झ्रिरहेको थियो ।
‘सतियाले लछिमी मैयाले हातबाट झ्रझ्र झ्रझ्र असर्फी झरिरहेको फोटु ल्याएकी छ ।’
नैनी जण्ड थिइन् । सबै तर्किन्थे उनीसित । गाउँले कुरा काट्थे, ‘बब्बनकी जोरु सी कलासी छे । कनफुकनी र मुहँजोर पनि उत्तिकै छे । त्यसको असिल नाम त नैनी नभएर मन्थरा हुनुपथ्र्यो । गाउँमा सधैं रार मच्चाउँछे । त्यो बेलज्जीसित मुख लाग्नु भनेको गोबरको ढेरीमा पत्थर हान्नु जस्तै हो ।’ के सहन्थिन् नैनीले ! तुरुन्तै पाखुरा सुर्किंदै वचन फर्काइहालिन्, ‘दहिजरऊ, रातरातभरि तँजस्तो दुई मनको हरामीको डनलप बन्नुपर्छ । मैले यति भात पनि नखाऊँ ? तँ आफू भने दुनियाँको अगाडि डरपोकना भएर हिंड्छस्, घरमा भने अरबी घोडा बनेर मलाई लतियाउँछस् ?’
गाउँको बीचमा गजधम्म उभिएको पीपलको रूखमुनि सारा गाउँले जम्मा भएका थिए । रूखैमुनि डोरीवाला दुईवटा खटियामा पञ्च भलाद्मीहरू बसेका थिए । कोही सूर्ती माडिरहेका थिए, कोही कानमा राखेको बिंडी झ्किेर सल्काउँदै थिए । बब्बनले सबैका लागि चिलिमको जोहो गर्दै थिए ।
पञ्चैतीमा बिरादरीको मुख्य मान्छे भएर खाटमा सबैभन्दा अगिल्तिर खुट्टा झरेर बसेका थिए रामलाल । लक्ष्मी मैयाको फोटोप्रति गाउँलेहरूको आकर्षण र ईष्र्या देखेर उनले पुरानो उखान सम्झिए र फत्फताए, ‘एक नीम, सब घर शितलाहा । लछिमी मैयाको फोटु एउटा, वरदान भने सबैलाई चाहिएको छ ।’
रामलालले नै मागेपछि मिन्टुले दिन्नँ भन्न सकेन । रामलालले पहिला क्यालेण्डरलाई ढोगे । त्यसपछि बटारिएको क्यालेण्डर फुकाए र मुग्ध भएर लक्ष्मी मैयालाई हेरिरहे । तस्वीरमा हाँसिरहेकी लक्ष्मी मैयालाई देखेर उनी पनि गिजा देखाएर हाँसे । नैनीले कुरा निकालिहालिन् ।
‘सारा गाउँ कङ्गाल हुँदा, लछिमी मैयाले सिरिफ सतिया र रामनरेशलाई असर्फी दिन मिल्छ ?’ सतिया कराइन्, ‘किन मिल्दैन ? त्यो त लछिमी मैयाको मर्जी हो । उनले जसलाई पनि किरिपा गर्न सक्छिन् । मेरो लिलारमा लेखेको थियो, त्यही मारे मैले यो फोटु पाएँ । मेरो किस्मत चम्किन्छ भनेर तिमीहरूको करेजामा किन धायँ धायँ आगो बलेको ?’
त्यसपछि गज्जुलाल कड्किए, ‘अरे, पार साल बरखा नहुँदा हामी सबैले मिलेर बरखा होस् भनेर मेढक र मेढकीको शादी गराएको कुरा बिर्सिस् ?’
‘अनि बल्ल इन्दर भगवानको दिल खुस भयो, खूब झपटी हवा चल्यो र झमझम वर्षात् भयो । त्यो पानी हामीले आफ्ना लागि मात्र मागेका थिएनौं, पूरा गाउँको लागि मागेका थियौं । आजसम्म हामी सबैले एकअर्काको मरनी करनी, शादीव्याहमा साथ दिएकै छौं । हामी कसैको कसैसित वैमनस छैन । आपसमा विना स्वारथ दुःखकष्टमा साथ दिएकै छौं भने सुखमा पनि हामी सबैको बराबर हकदैया लाग्छ ।’ गज्जुलालको कुरा सुनेर सतियालाई असह्य भयो । धोती उचालेर उनी गज्जुलालमाथि झ्म्टिहालिन् । त्यसपछि के थियो ! आफ्नो मर्दमाथि हात हालेको गज्जुलालकी बूढी रमैयाले के सहन्थिन् ! फेरि सानो कुरामा रिसाइहाल्ने स्वभाव थियो उनको । उनी सतियामाथि जाइलागिन् ।
अनि रामनरेशतिर हेरेर आदेश दिए, ‘गाउँकै सिधासाधा मनई होस् तँ । तँलाई पनि हामी सबैको दुःखदर्द थाहा छ । त्यसैले तँ धनी भइस् भने हामीलाई विना ब्याजमा उधारी दिनुपर्छ ।’ सबैले रामलालको प्रस्तावको समर्थन गरे ।
सतिया र रामनरेशले भने बडो दुःखपूर्वक यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । सतिया त उदासै भइन् । घर आएर रामनरेशले भकभकाउँदै सम्झाए, ‘घाटा लाग्ने भयो भनेर किन मन दुखाउँछेस् ? मैयाले किरिपा गरेर हामीलाई दस असर्फी दिइन् भने हामीले अरूलाई दुइटा मात्र दिइन् भनिदिउँला । बातै खत्तम ।’ सतियाले चित्त बुझाए जस्तो त गरिन् । तर, मन शान्त भएको थिएन । उनी सबैभन्दा बढी नैनी र रमैयासित रिसाएकी थिइन् । हिजोसम्म तिनीहरू सतियाका सबैभन्दा मिल्ने साथी थिए । तर आज तिनैले उनलाई पञ्चैतीसम्म पुर्‍याए । हातै हाले । सतिया फत्फताइन्, ‘नाश होस् तिनीहरूको ।’
यति सराप्दा पनि सतियाको मन शान्त भएन । रात छिप्पिएपछि उनी कसैले नदेख्ने गरी नैनीको घरपछाडि गइन् । नैनीले रोपेको फर्सी गजबले सप्रिएको थियो र त्यसको झयाङ छाप्रो माथि–माथि चढेको थियो । भर्खर स–साना बतिलाहरू लाग्न थालेका थिए । गाउँमा चोर औंलाले देखायो भने सबै बतिलाहरू कुहिएर झ्र्छन् र फर्सी राम्ररी फल्न पाउँदैन भन्ने भनाइ थियो । सतियाले त्यही गरिन् । फर्सीका हरेक बतिलातिर उनले चोर औंला देखाइन् । रमैयाको घरपछाडि गएर पनि त्यसै गरिन् । नभन्दै केही दिनपछि नैनी र रमैयाका घरका फर्सी राम्ररी बढ्नै नपाई कुहिएर फुतुफुतु झ्र्न थाले । सतियाको मनको अग्नि शान्त हुँदै गयो ।
तर, एउटा अर्को चिन्ताले भने उनलाई अझै छाडेको थिएन । उनले र रामनरेशले पञ्चैतीमा आधा असर्फी गाउँलेहरूलाई दिने वाचा त गरेका थिए । तर, त्यो वाचा झूटो थियो । त्यसैले उनलाई आफ्नै झूटले कुटुकुटु खाइरहेको थियो । उनले झूटो बोल्यो भने विपत्तिहरू आउँछन् भन्ने सुनेकी थिइन् । त्यसैले उनले आफूलाई कौवाले टोकेको र गधाले दैलोमा पिसाब फेरिदिएको सपना देख्न थालिन् । रामलालले कुनै दिन भनेका थिए, ‘खराब सपनाले परेशान गर्‍यो भने तुलसी मैयालाई आफ्नो सपना सुनाउनुपर्छ ।’
सतियाको दुखेको हात चाँडै निको भयो । दुखेको मन झ्न् चाँडै निको भयो । यसरी समाजबाट एक्लिएका रामनरेशहरू फेरि समाजका हिस्सा बने ।
सतिया र रामनरेशलाई कुनै न कुनै दिन लक्ष्मी मैयाको हातबाट निस्केका असर्फी आफ्नो घरमा झ्र्छ भन्ने विश्वास अझै थियो । सतिया हरेक दिन बिहान अरहरको बढनीले झडबुखार गर्नुअघि असर्फी खस्यो कि खसेन भनेर भुइँमा हेर्थिन् । अरू बेला पनि सतिया र रामनरेश लक्ष्मी मैयातिर आशापूर्ण नजरले हेरिरहन्थे । यो गाउँको इतिहासमा रामनरेश र सतिया नै त्यस्ता पहिला दम्पती थिए, जो खाना खानुअघि हात जोडेर देवी मैयाको प्रार्थना गर्थे ।
निर्धन के घर पधारो मैया हमरो जीवन सम्हारो मैया ।।
तर, उनीहरूको प्रार्थनाको कुनै असर भएन । लक्ष्मी मैया उनीहरूको घरमा आइनन् । उनीहरूको जीवन सुधारिदिइनन् । मैयाको हातको असर्फी कहिल्यै उनीहरूको घरमा झ्रेन ।
एकदिन छुचुन्द्रोले लक्ष्मी मैयाको क्यालेण्डर खाइदियो । सतिया केही दिन उदास भइन् तर उनले अब बुझुकेकी थिइन्, परेको बेला लक्ष्मी मैया हैन, गरीब गाउँलेहरू नै काम लाग्छन् । राति सतियाले महुवाको रोटी आगोमा सेक्दै रामनरेशसित भनिन्, ‘देउतासित जति हात पसारे पनि उनीहरूबाट हामीले सलाईको एउटा काँटी पनि पाउँदैनौं । हामीले चुल्हो बाल्न त गाउँलेसितै आगो माग्नुपर्छ । जिनगीभर दागा धरेर केही फाइदा छैन । एकदिन झगडा गरे पनि सौ दिन यिनीहरूसितै गलबहिँया गरेर हिंड्नुपर्छ । हामीले आफ्नो मनलाई साधुबाबाको कछाड जस्तो मैला बनाउनुहुँदैन ।’